Championnat des Clubs de la Cavb Zône 7 ka nahatafavoaka ny ekipa Malagasy roa niatrika ny lalao famaranana dia ny Stef’auto teo amin’ny sokajy vehivavy ary ny Gnvb teo amin’ny sokajy lehilahy. Raha nisongadina tsy am-pisalasalana ny fahambonian’ny traikefa ananan’ny ekipan’ny Quatre Borne Maosiana izay voahosotra ho tompondan’ity fifaninanana ity teo amin’ny sokajy vehivavy nanoloana ny ekipa Malagasy Stef’auto tamin’ny fahazoan’izy ireo seta 3-0 mora foana (21-25) (16-25) (17-25), dia nanao izay ho afany ny mpilalaon’ny Gnvb Malagasy nanohitra ny Tampo Gecko avy atsy La Réunion nefa lavo ihany nony farany 3-2 (25-22) (17-25) (28-26) (19-25) ( 11-15). Samy nanambara avokoa na ny kapitenin’ny Gnvb, na ireo tompon’andraikitra hafa eo amin’ity taranja volley Malagasy ity fa voaporofo tamin’io sabotsy io fa ambony dia ambony ny haavo teknika ananan’ny Tgv Reonioney. “Tena ampy hangalana lesona ka hanovana paikady amin’ny manaraka ny niverenan’i La Réunion amin’ity fifaninanana ity, hoy manokana ny filohan’ny Gnvb ny kolonely Rakotomalala Heriniaina tamin’ny firesadresahany tamin’ny mpanao gazety teny Mahamasina. Nanao izay ho afany ireo mpilalaontsika, hoy izy, nefa tena nampiseho ny teknika avo lenta ry zareo Reonioney. Efa toerana tena tsara ho an’ny fifaninanana iraisam-pirenena izany tompondaka lefitra izany, hoy izy ary manery ny Gnvb hanazatra tena mafy manomboka eto ny zava-misy satria izy no ho solontenan’ny Faritra faha-7 andeha hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja Volley-ball amin’ny tsy maha ao anatin’ny Zône 7 ny Reonioney.
Marihana fa ny ekipan’ny St Denis (La Réunion) no nitana ny laharana faha-3 teo amin’ny sokajy vehivavy tamin’ity fifaninanana ity ary ny Trou Aux Biches Maorisiana kosa teo amin’ny sokajy lehilahy.